Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: September 2010
Gmail back up မှာ သတိပြုမိတာလေးများ
ဒါမျိုး ဘယ်သူတွေ စမ်းပြီးပီလည်း မသိဘူး အနော်တော့ လုပ်ချလိုက်ပီ :p
တကယ်ပါ ဒီ အကောင့် ayethein90 မှာ မေးတွေ ပြည့်နေပီလေ...
ဒါတောင် မှတ်မှတ်ရရ ၂၀၀၉ ဇွန်လကုန်မှ စဆောက်ထားတဲ့ အကောင့်နော်
မေးတွေ လွင့်လည်း မပစ်ချင်ဘူး ဒီအကောင့်ပဲ ဆက်သုံးချင်တယ် ဘာလုပ်မလဲ
ကိုအောင်ကြီး ပြန်တင်ပေးတဲ့ ဘက်ကပ်အတိုင်းပဲ အဲ့ဒီ နည်းနာအတိုင်းပဲ အတုယူတယ်
အခြား အကောင့်တစ်ခုဆောက်ပီး အဲ့အကောင့်ထဲ အကုန်လွှဲပလိုက်မယ် သွားလေရော့လဟယ်ပဲ :D
အကောင်-့A က မေးတွေကို အကောင့်-B ကို လွှဲပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ...
ဒါမျိုး လုပ်ကြည့်ချင် (ကလိကြည့်ချင်) တာလည်း ပါတယ်။ ဝါသနာကိုး..အဟဲ
အဲ့ဒီ process မှာ သတိပြုမိတာလေးတွေ Fri တို့ကို ပြန်မျှဝေခြင်လို့ပါ..
ဆက်တင်းချိန် စ ဖော်ဝပ်ပေးပြီး အကောင်-့A က ထွက်ပေးလိုက်တာနဲ့ အကောင်-့B က စဆွဲတော့တာပဲ
(* အကောင်-့A က ကိုယ် လော့အောက် မပေးသေးသမျှ အကောင်-့B မှာ အယ်ရာ ပြတယ်.. ဆွဲလို့မရကြောင်းပေါ့ ဒါနဲ့ ထွက်ပေးလိုက်တယ်)
လွှဲချိန် ဘယ်လောက် ကြာမြင့်လဲ?
အကောင်-့B ထဲ ကို အကောင်-့A က မေးတွေ အဟောင်းဆုံးကနေစလို့ တစ်စောင်ချင်း ဝင်လာတယ်
ကြည့်နေရင် စိတ်မရှည်စရာပဲ...တကယ် နှေးတယ် အားလုံး 7ဂစ်ရဲ့ ၇၀% ကို ၄-၅ ရက်လောက် ကြာအောင် လွှဲနေတယ်။ *** ၇၀% လို့ ဘာလို့ ပြောလဲဆိုတာ အောက်တစ်နေရာမှာ ပြန်ပြောပြဦးမယ်။
သူလွှဲလို့ ကုန်သလောက်လည်း ရှိရော..ခုနက အကောင်-့A က ဘက်ကပ်ဆက်တင်းကို ပြန်ဖြုတ်လိုက်တယ်။ ခုဆို အကောင်-့B ထဲမှာ အကောင်-့A က မေးအဟောင်းတွေ နဲ့တင် ပြည့်သလောက် ရှိသွားပီ။ ကျနော်က အကောင်-့A ကိုပဲ ဆက်သုံးလို့ ရသွားပီ။ ဥပမာ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ် တင်စားရရင် အကောင်-့A ကို အိမ်သာကျင်းဟောင်း ဖော်ခိုင်းလိုက်သလိုပဲ။ အဟဲ...ပြန်သုံးလို့ ရပီပေါ့။ ဒါပေမယ့်......
အကုန် မပြောင် သွားဘူးဗျို့....
၃၀% လောက် ကျန်နေသေးတယ် (*ခုနက ပြောထားတယ်နော် ၇၀% ပဲ လွှဲလို့ ရကြောင်း)
Gmail Account ၏ space ကို ယူသုံးထားတာ မှန်သမျှ (ဥပမာ။ Google Documents၊ Google Calendar, Reader စသဖြင့် နေရာတွေမှာ ကိုယ်သိမ်းထားသမျှတွေ ပါမသွားဘူး။ အော်တို လွှဲလိုက်လို့ မရခဲ့ဘူးဗျို့။
နောက်ပီး Chat History တွေ လည်း ကျန်နေခဲ့တယ်။ လွှဲလို့ မရဘူး။
နောက်ပီး draft တွေ အကုန် (canned responsesတွေပါ အပါအဝင်) ကျန်နေခဲ့တယ်။
လွှဲလိုက်တဲ့အထဲက မေးအချို့ ပျောက်ကုန်တယ်။ ဒီကထွက် - ဟိုလည်းမရောက် မေးတွေလေ..။ Google ဆာဗာက လှမ်းဖတ်ပီး ဒါတော့ ဘာဖြစ်တယ် ဒါတော့ ညာဖြစ်နေတယ် (ကိုယ့်တော့ အသိပေးပါရဲ့) သူက ဝင်စွက် ဖျက်ပစ်တာ ခံရတယ်။ ကုန်ရောပဲ... ပြန်မရတော့ဘူးဗျာ... :'(
သတိထားမိတာတော့ cmd တို့ virus တို့ del တို့ စတဲ့ ကွန်မန်းတွေ ပါတဲ့ စာတွေပေါ့။
စာရိုးရိုးတွေပဲ အတက်တောင် မပါဘူး...အဲ... ဒါပေသိ Google က မသင်္ကာဘူးဆိုပီး ဖျက်ပလိုက်တယ်။
* ကျိမ်းသေတယ်.. Fri တို့ ဒီမေးလည်း လွှဲတဲ့အထဲ ပါသွားရင် အဖျက်ခံ ရမှာပဲ :D
အောက်မှာ အဖျက်ခံလိုက်ရတဲ့ မေးတစ်စောင်အကြောင်း Google က အကြောင်းကြားပုံလေး ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
The message "[TaunggyiFamily-Myanmar] Re: အလွယ်ဆုံး VIRUS လေးရေးကြည့်ရအောင်" from king ofstar (kingofstar7) containedavirus orasuspicious attachment. It was therefore not fetched from your account ayethein90 and has been left on the server.
If you wish to write to king, just hit reply and send kingamessage.
အော်...ဒါနဲ့ ကြုံရင် "အလွယ်ဆုံး VIRUS လေးရေးကြည့်ရအောင်" လေး ပြန်မျှပေးပါဦးဗျို့... :)
2010/8/17 @nug Gyi <noriyuki.***@gmail.com>
ဒီ post ကို မတင်ခင်မှာ အကြိမ်ကြိမ် သချာ စဉ်းစားပါသေးတယ်။ သူခိုးလမ်းပြ
လုပ်သလို၊ ကျားကို အတောင်ပံ တပ် ပေးသလို ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ဘာမှ မသိ
နားမလည်သေးတဲ့ သိုးငယ်များကို ကျားပါးစပ် ပေါက်က လွတ်စေဖို့အတွက် လည်း အားလုံး
သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဘက်ကပဲ စဉ်းစားပြီး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ
အတွက် အသုံးပြုလိုသူများအတွက် သုံးနိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ဘယ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့မှ မတူတဲ့ မြန်မာ လူမျိုးများရဲ့ ထူးခြားတဲ့
ဓလေ့စရိုက်တစ်ခု က အင်တာနက်ပေါ်ကနေ ချစ်သူဖြစ်ရင် ချစ်သူရဲ့ Gmail account ရဲ့
Password ကို တောင်းပြီး အကောင့်ထဲ ဝင်ကြည့်တာ၊ ဖြတ်သင့်တာဖြတ်တာ၊ စစ်သင့်တာ
စစ်တာတွေ လုပ်ကြတာပါပဲ။ မသိရင်တော့ စစ်နေချိန်၊ ဝင်ကြည့်နေချိန်မှာ ကိုယ့်ထဲက
အကြောင်းတွေ သူသိသွားပြီး Sign out လုပ်လိုက်တာနဲ့ သူဘာမှမသိတော့ဘူး၊
ဘာမှမတက်နိုင်တော့ဘူး၊ ခဏပြပြီး Password ပြန်ချိန်းလိုက်မယ် လို့ ဘယ်တော့မှ
မစဉ်းစားလိုက်ပါနဲ့။ ဝင်ကြည့်နေချိန် ခဏ မှာ ကြည့်နေတာလေး နဲနဲတင် သိသွားမှာ
မဟုတ်ပါဘူး၊ ဟိုး အရင် account စ လုပ်ချိန်ကနေ နောက်ဆုံး account ကို လုံးဝ
မသုံး တော့ချိန်ထိ အားလုံး သိအောင် လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။
ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ပဲ ဆိုရင်တော့ account အသစ် တစ်ခု သုံးချင်ချိန်တွေမှာ အရင်က
အဟောင်းထဲက Data တွေ အားလုံးကို အသစ်ထဲ ကို ပြန်သိမ်းဖို့ အရမ်း အဆင်ပြေပါတယ်။
အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Email ထဲမှာရှိနေတဲ့ Mail တွေကို
တစ်ခြား Email တစ်ခုကို တစ်စောင်ချင်း Forward လုပ်စရာမလိုပဲ
နာရီပိုင်းအတွင်းမှာ သူ့အလိုလို တစ်ခြား Email တစ်ခုထဲကို Download
ဒီ နည်းလမ်းက ကိုယ့်ရဲ့ Password ကို အခြား တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပေးထားတတ်တဲ့
သူတွေအတွက် အရမ်းကို အန္တရယ်များတဲ့ နည်းလမ်းပါ။ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ ကိုယ့်
ထဲကရှိသမျှ Mail အားလုံးကို ကိုယ့် Email address password ကိုသိနေတဲ့
တစ်ခြားလူတစ်ယောက်က download ချသွားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူ ချတယ်ဆိုတာ
ကိုယ့်ထဲမှာလည်း စစ်လို့မရဘူးနော်။ ဥပမာပြောရရင် sample က ကိုယ့်ရဲ့
mail ထားပါတော့ အခြား မသမာသူ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ရဲ့ Password သိနေတယ်ဆိုရင်
အောက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းအတိုင်း လုပ်သွားပါက ကိုယ့်ထဲကို Verification code
ပါတဲ့ mail တစ်စောင်ပဲဝင်လာမယ်။ အဲဒီ mail ကိုလဲ အဲ့ဒီ မသမာသူ
တစ်စုံတစ်ယောက်ကပဲ ယူပြီးတာနဲ့ ပြန်ဖြတ်သွားရင် ကိုယ့်အနေနဲ့ ဘာမှတောင်
မသိလိုက်ရပဲ အားလုံးပါသွားလိမ့်မယ်။ အဟောင်းတွေ ပါသွားရုံတင် မဟုတ်ပါဘူး
နောက်ထက် အသစ်တွေ ဝင်လာရင်လည်း သူ့ဆီကိုအလိုလို download ချနေမှာပါ။
ဒီ post ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ (၁) မသိသူများအတွက် အသိတစ်ခု တိုးစေဖို့၊ (၂)
ကိုယ့် Email လုံခြုံရေးကို သတိပြုနိုင်စေဖို့နဲ့ (၃) ကိုယ့်ရဲ့ Email တွေကို
back up လုပ်လိုသူများ လုပ်နိုင်ဖို့ အတွက်ပါ။
သူများ Mail ကို ခိုးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးပဲ မှန်ကန်စွာအသုံးချမယ်လို့
ပထမဆုံး ကိုယ့် Mail တွေကို Back up လုပ်ပြီး သိမ်းထားဖို့အတွက် Gmail
ပြီးရင် အဲဒီ Email အသစ်ထဲကိုဝင်ပါ။ ဥပမာ.. sample ဆိုတဲ့ Mail ကို
အသစ် လုပ်ထားသော Mail တစ်ခု ကနေ Download ဆွဲမယ်ဆိုပါစို့။
5. Download ချ မယ့် account ရဲ့ Email Address ကို ဖြည့်ပါ။ (Download ချ
7. Password ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Label incoming messages box ရှေ့တွင်
အမှန်ခြစ်ပေးပြီး Dropdown တွင် မိမိနှစ်သက်သလို lable အသစ်တစ်ခု ပေးပါ။
12. Code နံပါတ်ကို ထည့်ရန် နေရာနှင့် Verify button တစ်ခု ကျလာပါလိမ့်မယ်။
Code နံပါတ် ရရှိရန်အတွက် မူလ account ထဲသို့ ပြန်ဝင်ပါ။ inbox (သို့) span
mail ထဲသို့ code နံပါတ် ပါသော mail တစ်စောင် ရောက်ရှိ နေပါလိမ့်မယ်။
နာရီအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ Email အားလုံး ရောက်ရှိလာပါ လိမ့်မယ်။ အားလုံးပဲ
မှတ်ချက်။ ။ အနာသိရင် ဆေးရှိ။ အမေးရှိရင် အဖြေရှိ ဆိုတဲ့အတိုင်း
အသိနောက်ကျသွားလို့ ခံလိုက်ရသူတွေ၊ ကိုယ့် Email အချင်းချင်း Data
တွေပြောင်းရွှေ့ရာမှ ရပ်တန့်ချင်သူတွေနဲ့ ကိုယ် Gmail ကို သံဿယ ရှိသူတွေ အတွက်
ပြန်ဖြေနည်းတစ်ခု တော့ရှိပါတယ်။ ကိုယ် Password ပေးဖူးတဲ့ တစ်ယောက်ယောက် က
ကိုယ့်ဆီက Email တွေကို အထက်ပါ နည်းအတိုင်း Download ချ သွားပြီ ဆိုပါဆို့။
အဟောင်းတွေ ပါသွားတာတော့ ဘာမှ မတက်နိုင်တော့ ပါဘူး။ အဟောင်းတွေ ပါသွားတာကို
တားလို့မရပေမယ့် အသစ်တွေ သူ့ဆီမဝင်အောင် တားလို့တော့ ရပါသေးတယ်။
ဘယ်လိုတားမလဲဆိုတော့ နောက် post တစ်ခုတင်ပြီး ဖြေရှင်း ရေးသား ဖော်ပြ ပေးပါမယ်။
Gmail အသုံးပြုသူအားလုံး လုံခြုံ အစဉ်ပြေမှုများနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။
ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရေးလိုက်ပါ့မယ် နောက်ထပ်ကို့မေလ်းတွေကို bck up ချလို့မရတော့အောင်
မိမိဂျီမေးလ် settingိကိုသွားပါ forwarding and POP/IMAP ကိုသွားပါ
disable POP ကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ save changes ကိုနှိပ်ပါ
မိမိ ဂျီမေလ်းကို Post Of Protocol (POP) server ကနေ ၀င်ခွင့်ကိုပိတ်လိုက်မှာဖြစ်လိ
bck up ချမဲ့သူက နောက်ပိုင်းမေလ်းတွေကို ရရှိတော့မှာမဟုတ်ပါ
ဆက်လုပ်ရင်လဲ မိမိဂျီမေလ်းအကောင့်ကို သူ bck up လုပ်ရန် ရိုက်လိုက်တာနဲ့
Access Denied for this user name & password ဆိုပြီးဖြစ်နေပါ့မယ်
အကောင်းဖက် အပြုသဘောဆောင်သော ဗဟုသုတများပြည့်စုံပါစေ။
Posted by Ko Gyii at 7:19 PM3comments :
Links to this post Labels: Back-up , Gmail , Gmail Back-up , Google , အိုင်တီ , အီးမေးလ်
စိတ်၏ ပျံ့လွင့်တတ်သော သဘောကို ထိန်းချုပ်ခြင်း
တရားထိုင်လျင် စိတ်၏ မတည်ငြိမ်ခြင်း၊ ပျံ့လွင့်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန် နည်းတစ်နည်း ရပါသည်။
ထိုနည်းကို ဓမ္မမိတ်ဆွေ ကိုဝင်းမင်းထွန်းမှ ကျေးဇူးပြုပါသည်။
စိတ်ကိုလျှော့ထားပါ။ တင်းမထားရပါ။ သက်တောင့်သက်သာနေပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်ကဆူနေလဲ ထိုဆူညံတာတွေကိုပဲ မြဲမမြဲ ပြောင်းမပြောင်း ပျက်မပျက် သုံးသပ်ပေးနေပါ။
စိတ်ဆိုတာ လျှင်မြန်စွာပျံ့လွင့်တယ်လို့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထောက်ခံချက်ကိုယူလိုက်ပါ
ထို ပျံ့လွင့်တဲ့စိတ်ကလေးကို မိမိရဲ့နောက်အသိစိတ်ကလေးနဲ့ပဲ ပျံ့လွင့်တဲ့စိတ်ကလေး ဟာမြဲသလား ပြောင်းသလား ပိုလာသလား သုံးသပ်ပေးလိုက်ပါ
အဲဒီလိုသုံးသပ်နေခိုက်မှာ ပျံ့လွင့်စိတ်မရှိ တော့ဘူးဆိုတာ မိမိကိုယ်တိုင်တွေရပါလိမ့်မယ်
ဒါဟာ မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိမလ ကိုယ်တိုင်လက်ဆင့််ကမ်းခဲ့သော တရားအားထုတ်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းအကျိုး အဆိုးအကောင်းကို အသေအချာ လေ့လာတတ်တဲ့သူအတွက် တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ မခဲရင်းနိုင်ပါဘူး။ လောကဒါဏ်တွေနဲ့ တွေ့တဲ့ အခါ ဓမ္မဆေးနဲ့ ကုတာအကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ကြောင်း သင်ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ သိလာပါလိမ့်မည်။
(ဓမ္မမိတ်ဆွေ ကိုဝင်းမင်းထွန်းမှ ကုသိုလ်ပြုပါသည် ခင်ဗျား...)
Posted by Ko Gyii at 11:49 PM No comments :
Links to this post Labels: ဘာသာရေး
ပါဏာတိပါတ။ သတ္တ၀ါရဲ့ အသက်ကို သတ်ခြင်းအတွက် တိုက်ရိုက် တာဝန် မရှိအောင် ကြိုးစား ရှောင်ကြဉ်ရခြင်း
သူများအသက်သတ်ခြင်းသည်ကြီးမားသော အကုသိုလ်ဖြစ်၏ မည်သည်ဘာသာနှင့်မျှမကြည့်ဘဲ လောကဓမ္မနည်းအရကြည့်မည်ဆိုပါက သူတပါးအားသတ်ခြင်းသည်မကောင်း တူညီသောသက်ရောက်မှုအတိုင်းမှာ တူညီိသောတုန့်ပြန်မှုရှိသည်။) ထို့ကြောင့်သူတပါးအား(တရိစ္ဆာန်အပါအဝင်) သတ်သောသူသည်မည့်သည်ချမ်းသာမှမရနိုင်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်လည်း သတ်လျှင် အပြစ်ရှိတယ် နောက် ကိုယ်စားရန် သူတပါးကသတ်ပေးလျှင်လည်း အဲဒီအသားကိုစားရင်အပြစ်ရှိတယ်။ ကိုယ်ရှေ့မှာသတ်နေသောအသားကိုစားလျှင်လည်းအပြစ်ရှိတယ်။ သတ်နေတာကိုကြားနေရသောအသားကိုစားလျှင်လည်းအပြစ်ရှိတယ်။
အထက်ပါစာသားအရ ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် ဘာအသား၊ ဘယ်လိုအသားကို စားစား၊ အသားကိုစားလျှင် အပြစ်ရှိတယ်လား?
မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာအရ လွဲမှားသောခံယူချက်သာ ဖြစ်သည်။ အမှန်တရားမှာ... ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် သူတပါးအသက်ကို သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းတည်းဟူသော ပါဏာတိပါတ သိက္ခာပုဒ် ဆောက်တည်တဲ့ အခါမှာ သတ္တ၀ါရဲ့ အသက်ကို သတ်ခြင်းအတွက် တိုက်ရိုက် တာဝန် မရှိအောင် ကြိုးစား ရှောင်ကြဉ်ရခြင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။
မေး - သင် အသားစားရင် သတ္တ၀ါတစ်စုံတစ်ဦး သေတဲ့အတွက် သင့်မှာ သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့် တာဝန်ရှိပါတယ်။ အဲဒါဟာ ငါးပါးသီလထဲက ပထမ သိက္ခာပုဒ်ကို ချိုးတာ မဟုတ်ပါဘူးလား။
ဖြေ - မှန်ပါတယ်။ တစ်စိတ် တစ်ဒေသအားဖြင့် သွယ်ဝိုက်ပြီးတာဝန်ရှိပါတယ်။ သို့သော်လဲ သင် ဟင်းသီး ဟင်းရွက် စားတဲ့အခါလဲ အတူတူပါပဲ။ လယ်ယာဦးကြီးက ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ပိုးပေါက်မပါဘဲ သင့် ထမင်းစားပွဲပေါ် ရောက်အောင် အဆိပ်တွေ ဖျန်းပေးရပါတယ်။ ပြီးတော့ သင့် သားရေခါးပတ်အတွက်၊ လက်ဆွဲအိပ်အတွက်၊ သင်သုံးတဲ့ ဆပ်ပြာချက်ဖို့ အမဲဆီ၊ ပြီးတော့ တခြား တိရစ္ဆာန် သားရေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ ဒါတွေအတွက် တိရစ္ဆာန်တွေကို သတ်ရပါတယ်။ တခြား သတ္တ၀ါ သေတဲ့အတွက် တစ်နည်းနည်းနဲ့ သွယ်ဝိုက်ပြီး တာဝန် မရှိအောင် အသက်ရှင်နေဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာ ဒုက္ခသစ္စာရဲ့ ပုံစံ တစ်ခုပါပဲ။ သူလို ကိုယ်လို သာမာန် အသက်ရှင်နေတာဟာ ဆင်းရဲပါတယ်။ ကျေနပ်ဖွယ် မရှိပါဘူး။ သင် ပါဏာတိပါတ သိက္ခာပုဒ် ဆောက်တည်တဲ့ အခါမှာ သတ္တ၀ါရဲ့ အသက်ကို သတ်ခြင်းအတွက် တိုက်ရိုက် တာဝန် မရှိအောင် ကြိုးစား ရှောင်ကြဉ်ရပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စာရှုသူများ သင်္ကာကင်းရန် အကျယ်ကို အောက်ပါ စာမျက်နှာမှ ကျွန်တော် ပြန်လည် ကူးယူဖော်ပြပါရစေ..။
ဖတ်ရှုပေးခြင်းအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ခင်ဗျား လေးစားစွာဖြင့် /ဧးသိမ်း/
(credit to: http://myatlayngon.blogspot.com/2010/02/txt.html or http://myochitmyanmar.org/2008-07-25-07-31-58/2008-08-30-03-23-18/4869-2010-03-20-21-35-50)
ဒီစာအုပ်က ဘာသာပြန် စာအုပ်ပါ... စာအုပ်မူရင်း Good Question Good Answer အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ကို ရေးသားသူက သြစတြေးလျ နိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးVen. Shravasti Dhammika ပါ။ ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားက မြန်မာလို ဘာသာပြန်ပေးထားတာပါ. စာအုပ်ကို ၁၉၉၃ခုနှစ် မှာ ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်ပြောပုံအရကတော့ ဒီစာအုပ်မထုတ်မီ မြတ်မင်္ဂလာ စာစောင်မှာ ဒီစာအုပ်ကိုပဲ ပညာရှင် တစ်ဦးက ဘာသာပြန်ပြီး အခန်းဆက်အဖြစ် ဖေါ်ပြဖူးပါတယ်။
ဖြေ - “ဗုဒ္ဓဘာသာ“ ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ “ဗုဓိ“ ဆိုတဲ့ စကားလုံးမှ လာတာပါ။ “ဗုဒ္ဓ“ ဆိုတာ (ကိလေသာ တည်းဟူသော အိပ်ပျော်ခြင်းမှ) “နိုးလာသူ“ လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ နိုးကြားရေး အတွေးအမြင် (ဒဿန) ပညာပါပဲ။ ဒီဒဿနပညာကို ဂေါတမနွယ်ဖွား သိဒ္ဓတ္ထ မင်းသားကနေ ဘုရား ဖြစ်လာတဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက စတင်ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟာ သက်တော် ၃၅နှစ်မှာ (ကိလေသာ တည်းဟူသော အိပ်ပျော်ခြင်းမှ) နိုးလာပြီးလျှင် ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပေါင်း သန်းသုံးရာကျော် ရှိနေပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာလောက် အထိတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အရှေ့တိုင်း ဒဿနပညာရပ် တစ်ခုအဖြစ်သာ တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လဲ ယခုအချိန်မှာ ဥရောပနှင့် အမေရိကတိုက်ရှိ နိုင်ငံပေါင်း များစွာမှာလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဦးရေ တဖြည်းဖြည်း တိုးပွါးနေပါတယ်။
ဖြေ - ဒဿနပညာဆိုတာ အင်္ဂလိပ်စကား Philosopy ကို ဘာသာပြန်ထားတာပါ။ အဘိဓာန်များ ဖွင့်ပြချက်အရ ဆိုရင် "philo"ဆိုတာ “ချစ်ခင်ခြင်း မေတ္တာ“ လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ "sophy" ဆိုတာ “ပညာ“ လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ ဒီတော့ "Philosopy" ဆိုတာ “ပညာကို ချစ်ခင်ခြင်း“၊ သို့မဟုတ် “မေတ္တာနှင့် ပညာ“ လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ ဒီစကား နှစ်လုံးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အပြည့်အ၀ ဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားက သဘာဝတရားကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ကျွန်ုပ်တို့ နားလည် နိုင်ရေးအတွက် အပြည့်စုံဆုံး ဥာဏ်ပညာအရည်အသွေး တိုးတက်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ သင်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ သတ္တ၀ါအားလုံးရဲ့ မိတ်ဆွေသဖွယ် ဖြစ်နိုင်စေရန် မေတ္တာ ကရုဏာတရား တိုးပွါးအောင် ကြိုးစားဖို့ကိုလဲ သင်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို အတွေးအမြင် ပညာတစ်ရပ်လို့ ဆိုနိုင်သော်လဲ သာမာန် အတွေးအမြင်ပညာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြင့်မြတ်သော အတွေးအမြင်ပညာ (Supreme Philosopy) သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြေ - ခရစ်မပေါ်မီ ၅၆၃ ခုနှစ်မှာ အိန္ဒိယပြည် မြောက်ပိုင်း (ကပ္ပိလ၀တ်ပြည်) ဘုရင် သုဒ္ဓေါဒနနှင့် မိဖုရား မယ်တော်မာယာတို့မှ သားကလေးတစ်ယောက် ဖွားမြင်ပါတယ်။ ဒီမင်းသားကလေးဟာ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့် ကြီးပြင်းလာရသော်လဲ နောက်ဆုံးမှာ လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဟာ ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုကို မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာ တွေ့လာရတယ်။ ဒီမင်းသားဟာ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သူတွေ့မြင်ရတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြောင့် အကြီးအကျယ် စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ပြီး လူသားတို့ ချမ်းသာရေးအတွက် သော့ချက်ကိုရှာဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အသက်၂၉နှစ် ရှိတဲ့အခါ ဒီမင်းသားဟာ သူ့ရဲ့ကြင်ယာတော် (ယသောဓရာ)နှင့် သားတော်(ရာဟုလာ)ကို ထားခဲ့ပြီးတော့ အဲဒီခေတ်က ဘာသာရေး ဆရာကြီးများရဲ့ အထံမှာ အသိပညာ ဆည်းပူးဖို့ ထွက်လာခဲ့တယ်။ သူတို့ဟာ ဒီမင်းသားကို မြောက်မြားစွာ သင်ကြား ပေးကြသော်လဲ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့ အကြောင်းရင်း ဇစ်မြစ်ကို မသိကြတဲ့အတွက် ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကို ဘယ်လို ကျော်လွန်အောင် လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလဲ မသိကြဘူး။ သိဒ္ခတ္ထမင်းသားဟာ (ဥရုဝေလတော) မှာ ခြောက်နှစ် ကြာအောင် လေ့လာ ပွါးများ အားထုတ်ပြီးတဲ့ အခါမယ် အ၀ိဇ္ဇာကို ပယ်ခွါနိုင်တဲ့အတွက် (အမှန်တရားကို) ထိုးထွင်းသိမြင်သွားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး သူ့ကို “ဗုဒ္ဓ“ (ကိလေသာတည်းဟူသော အိပ်ပျော်ခြင်းမှ) “နိုးလာသူ“လို့ ခေါ်ဝေါ် သမုတ်ကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရှင်တော် မြတ်ဘုရားဟာ အဲဒီအချိန်မှစပြီး ၄၅နှစ်ပတ်လုံး အိန္ဒိယပြည် မြောက်ပိုင်းမှာ သူတွေ့သိထားတဲ့ တရားတော်များကို လှည့်လည်ဟောပြော ခဲ့ပါတယ်။
မေး - ဗုဒ္ဓဟာ သူ့ရဲ့ကြင်ယာတော်နဲ့ သားတော်ကို ပစ်ထားခဲ့တဲ့အတွက် တာဝန်မဲ့ရာ မရောက်ဘူးလား။ (ဆက်ဖတ်ရန်) ဖြေ - ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာ သူ့ရဲ့ ကြင်ယာတော်နဲ့ သားတော်ကို လွယ်လွယ်နဲ့ ပစ်ထားနိုင်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူအချိန် အကြာကြီး စဉ်းစားပြီး တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ် ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးကျမှ သူ့မိသားစုကို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက် တာထက် တလောကလုံးရဲ့ အကျိုးကို ဆောင်ရွက်တာက ပိုပြီး အကျိုး ကြီးမားတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ဒီလမ်းကို ရွေးချယ်လိုက်တာပါပဲ။ ကြီးမားတဲ့ မဟာ ကရုဏာတော်က ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကို တလောကလုံးရဲ့ အကျိုးကို ဆောင်စေတာပါပဲ။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး အဆင်းရဲအပင်ပန်း ခံမှုကြောင့် တလောကလုံး ကြီးမားတဲ့ အကျိုးကို အခုတိုင် ခံစားနေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာ တာဝန်မမဲ့ကြောင်း ထင်ရှားပါတယ်။ ဒါဟာ အကြီးမားဆုံးသော စွန့်လွှတ်မှု ကြီးပါပဲ။
ဖြေ - ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာ ထာဝရဘုရား မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက သူဟာ ထာဝရဘုရား လို့ဖြစ်စေ၊ ထာဝရဘုရားရဲ့ သားတော်လို့ဖြစ်စေ၊ ထာဝရဘုရားက လွှတ်လိုက်တဲ့ တမန်တော်လို့ဖြစ်စေ မမိန့်ကြားပါဘူး။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာ အလုံးစုံ ပြည့်စုံတဲ့ လူသား တစ်ဦးပါပဲ။ ဒါကြောင့် သူ့လို ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုးစားလျှင် ကျွန်ုပ်တို့လဲ သူ့လိုပဲ အလုံးစုံ ပြည့်စုံသူများ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း မိန့်ကြားတော် မူပါတယ်။
ဖြေ - ကိုးကွယ်နည်း အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ တချို့က တစ်စုံတစ်ခုသော တန်ခိုးရှင်ဘုရားကို (a God) ကိုးကွယ်တဲ့အခါ အဲဒီဘုရားကို ချီးကျူးထောပနာ ပြုကြတယ်။ ဂုဏ်ပြုကြတယ်။ တစ်စုံတစ်ရာ ပူဇော် ပသ ကြတယ်။ ကိုယ်လိုတာကို ဘုရားဆီမှာ တောင်းကြတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ကြတာကတော့ မိမိတို့ရဲ့ ချီးကျူးထောပနာသံကို အဲဒီဘုရားက ကြားလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်လို့၊ ပူဇော် ပသ တာကို လက်ခံလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်လို့၊ ဆုတောင်းတာကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်လို့ပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ကတော့ ဒီလို ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်မှု မျိုးကို မလုပ်ကြပါဘူး။ တခြား ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်မှုတစ်မျိုးကတော့ မိမိတို့ လေးမြတ်ကြည်ညိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ရာကို ရိုသေသမှု ဂါရ၀ ပြုကြတယ်။ ဆရာအခန်းထဲ ၀င်လာရင် နေရာက ထ ပေးကြတယ်။ ဂုဏ်သရေရှိတဲ့ လူနဲ့တွေ့ရင်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြတယ်။ အမျိုးသားသီချင်း တီးရင် မတ်တပ်ရပ် အလေးပြုကြတယ်။ ဒါတွေအားလုံးဟာ ရိုသေလေးစားမှုကို ပြတဲ့ အမူအရာတွေ ပါပဲ။ လေးမြတ်ကြည်ညိုမှုကို ဖေါ်ပြကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အရိုအသေ ဂါရ၀ပြုပြီး ရှိခိုး ကိုးကွယ်မှုဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ပြုလုပ်ကြတဲ့ ရှိခိုး ကိုးကွယ်မှုမျိုးပါပဲ။ တင်ပလ္လင် ခွေ ထိုင်ပြီး ရင်ခွင်ထက်မှာ လက်နှစ်ဖက်ကို ရွရွကလေးချထားတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွါးတော်ရဲ့ မဟာကရုဏာတော်ဖြင့် ကြည်လင် လန်းဆန်းနေတဲ့ မျက်နှာတော်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ သန္တာန်မှာ ငြိမ်းအေးမှုနဲ့ မေတ္တာတရား တိုးပွါးအောင် ကြိုးစားကြဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို သတိပေး နေပါတယ်။ အမွှေးတိုင်ရဲ့ အမွှေးနံ့က ကျွန်ုပ်တို့ သန္တာန်မှာ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ ပျံ့နှံ့နေစေဖို့ သတိပေးနေပါတယ်။ ဆီမီးကတော့ ပညာဆီမီး တန်ဆောင် ထွန်းပြောင်စေဖို့ သတိပေးနေပါတယ်။ ကပ်လှူထားတဲ့ ပန်းများရဲ့ ညှိုးနွမ်းကြွေကျသွားတဲ့ သဘောက ကျွန်ုပ်တို့အား အနိစ္စတရားကို သတိရစေပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွါးတော်ရှေ့မှာ ဦးညွှတ်ရှိခိုးခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကို တရားဓမ္မ ဟောပြောညွှန်ပြ ဆုံးမတော်မူတဲ့အတွက် ဗုဒ္ဓရှင်တော် မြတ်ဘုရားရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို လေးမြတ်ကော်ရော် ပူဇော်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များရဲ့ ရှိခိုးကိုးကွယ်မှုပါပဲ။
ဖြေ - ဒီလို အပြောမျိုးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို နားလည်မှားနေတဲ့ လူတွေ ပြောကြတဲ့ စကားတွေပါ။ အဘိဓာန်များကတော့ ရုပ်တုကို ထာဝရဘုရား(God) အဖြစ်နဲ့ ရှိခိုး ကိုးကွယ်ကြတာကို ရုပ်တု ကိုးကွယ်မှု လို့ ဖွင့်ပြကြပါတယ်။ သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဟာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကို ထာဝရဘုရားတစ်ပါး(God) အနေနဲ့ ယုံကြည် သိမှတ်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဟာ သစ်သားရုပ်တု၊ သံရုပ်တု၊ ကြေးရုပ်တု စသည်ကို ဘယ်မှာ ကိုးကွယ်ကြပါမလဲ။ သို့သော်လဲ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ဘာသာတရားတိုင်းမှာ ဘာသာဝင်တိုင်းဟာ အယူအဆ အမျိုးမျိုးကို ဖေါ်ပြဖို့ အမှတ်လက္ခဏာ(Symbol) အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဥပမာ - တာအိုဘာသာမှာဆိုရင် ဆန့်ကျင်ဘက် နှစ်ခုတို့ရဲ့ ညီညွှတ် ပေါင်းစည်းမှုကို ဖေါ်ပြဖို့ရာ ယင်နဲ့ယန်(Ying -Yang) ကို အမှတ်လက္ခဏာအဖြစ် အသုံးပြုပါတယ်။ ဆစ်ဘာသာမှာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုကို ဖေါ်ပြဖို့ရာ ဓားကို အမှတ်လက္ခဏာအဖြစ် အသုံးပြုပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာ ခရစ်တော် တည်ရှိခြင်းကို ဖေါ်ပြဖို့ရာ ငါးကို အမှတ်လက္ခဏာအဖြစ် အသုံးပြုကြတယ်။ ခရစ်တော်ရဲ့ လူသားအတွက် အသက်စွန့်လွှတ်မှုကို ဖော်ပြဖို့ရာ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို အမှတ်လက္ခဏာအဖြစ် အသုံးပြုပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ လူသားတစ်ဦးရဲ့ အလုံးစုံပြီးပြည့်စုံမှုကို ဖေါ်ပြဖို့ရာ ဘုရားရုပ်တုတော်ကို အမှတ်လက္ဓဏာအဖြစ် အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရုပ်တုတော်က ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်များမှာ ပါဝင်တဲ့ လူသားနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သဘာဝများကို ကျွန်ုပ်တို့အား သတိရစေပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ လူသားကို ဗဟိုပြုပါတယ် ထာဝရဘုရား သိ ကို ဗဟိုမပြုဘူး ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ အလုံးစုံ ပြီးပြည့်စုံရေးနဲ့ အသိမှန် အမြင်မှန် ရရေးအတွက် ဗဟိဒ္ဓသန္တာန်ကို မကြည့်ရဘူး၊အဇ္ဈတ္တသန္တာန်ကိုသာ ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုလဲ ကျွန်ုပ်တို့အား သတိရစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ရုပ်တုကို ရှိခိုးကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲပြောဆိုချက်တွေဟာ မမှန်ပါဘူး။
ဖြေ - ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ နားမလည်တဲ့ အရာများကို တွေ့ရတဲ့အခါ အဲဒါတွေကို ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ထူးဆန်းနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဟာတွေကို အထူးအဆန်း တွေပဲလို့ အမှတ်တမဲ့ ဘာသိဘာသာ မနေပဲ အဲဒါတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေကို ရှာဖွေဖို့ ကြိုးစားသင့်ကြပါတယ်။ မှန်ပါတယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ လိုက်နာ လုပ်ဆောင်နေကြတာတွေဟာ ဗုဒ္ဓတရားတော်မှာ အခြေမခံပဲ နားလည်မှားမှုနဲ့ အများယုံကြည် လက်ခံထားတဲ့ အစွဲအလမ်းပေါ်မှာ အခြေခံထားတာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ခုတည်းမှာသာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာတိုင်းမှာပဲ ရံဖန်ရံခါ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ တရားတော်များကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ အသေးစိတ် ဟောပြတော်မူပါတယ်။ အဲဒါကိုမှ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နားမလည်ရင်တော့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကို အပြစ်ဆိုလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ မှတ်သားဖွယ် အဆုံးအမ တစ်ခုကတော့ ရောဂါဝေဒနာ ခံစားနေရသော လူတစ်ယောက်သည် ဆေးဆရာအထံမှ ဆေးကုသမှု ခံယူဖို့ လွယ်ကူပါလျက်နဲ့ ကုသမှု မခံယူလျှင် ဆေးဆရာ၏ အပြစ်မဟုတ်ပေ။ ထို့အတူပင် ကိလေသာရောဂါ အဖိစီး အနှိပ်စက် ခံနေရသူသည် မြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်များ ရှိနေပါလျက်နဲ့ တရားဆေးဖြင့် မကုစားလျှင် မြတ်စွာဘုရား၏ အပြစ်မဟုတ်ပေ။} ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပဲဖြစ်စေ၊ တခြား ဘာသာတရားကိုပဲဖြစ်စေ အဲဒီဘာသာတရားအကြောင်း ကောင်းကောင်း နားမလည်သူများက အမှား၊ အမှန်၊ အဆိုး၊ အကောင်း ကို မဆုံးဖြတ်သင့်ပါဘူး။
ဖြေ - ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလဲ ကုသိုလ်ဖြစ် လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကြပါတယ်။ သင်မကြားမိတာကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဟာ သူတို့လုပ်တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ အကြောင်းကို ၀ါကြွားပြောဆိုဖို့ မလိုဘူးလို့ ယူဆထားကြလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာဆီက ဂျပန် ဗုဒ္ဓဘာသာ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နစ်ခိုနိရ၀ါနို ဟာ ဘာသာတရားအားလုံး ပေါင်စည်းညီညွတ်မှု တိုးတက်ရေးကို လုပ်ဆောင်တဲ့အတွက် (Templeton Prize) တင်ပယ်လ်တန်ဆုကို ရရှိပါတယ်။ အလားတူပဲ ထိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး တစ်ပါးဟာ မူးယစ်ဆေး စွဲသူများကို ကုသရာမှာ ထူးချွန်တဲ့အတွက် မက်ဆေးဆေး ဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တုန်းကလဲ အရှင် ကန္တယပိဝတ် ဆိုတဲ့ ထိုင်းဘုန်းကြီးတစ်ပါးဟာ ကျေးလက် တောရွာများမှာရှိတဲ့ အခြေအနေမဲ့ ကလေးများကို နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် ပြုစု စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့အတွက် ]နော်ဝေ ကလေးများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆု} ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အနောက်တိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ (Western Buddhist Order) ဟာ အိန္ဒိယပြည်မှာ ဆင်းရဲသားများ အတွက် ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ စာသင်ကျောင်းတွေ၊ ကလေးပြုစု စောင့်ရှောက်ရေး ဌာနတွေ၊ ဆေးပေးခန်းတွေ၊ တနိုင် စက်မှုလုပ်ငန်း အသေးစားတွေ တည်ထောင်ပြီး ပြုစု ပျိုးထောင်ပေးနေပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဟာ တခြား ဘာသာဝင်များလိုပဲ သူတစ်ပါးကို အကူအညီ ပေးရတာဟာ သူတို့ရဲ့ ဘာသာတရား လိုက်နာကျင့်ကြံမှုကို ဖေါ်ပြတာပဲလို့ သိမြင်မှတ်ယူကြပါတယ်။ သို့သော်လဲ ဒါတွေကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို မထင်ပေါ်စေပဲ တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပဲ လုပ်သင့်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ ကုသိုလ်ဖြစ်လုပ်ငန်းတွေ အကြောင်းကို သင် သိပ်မကြားရတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဖြေ - လူတွေ စားသုံးကြတဲ့ သကြားတွေလဲ အမျိုးမျိုး ရှိကြတာ မဟုတ်လား။ သကြားဖြူ၊ သကြားညို၊ ကျောက်သကြား၊ သကြားရည်၊ ရေခဲသကြား စသည် အမျိုးမျိုး ရှိကြတာပဲ။ သို့သော်လဲ အားလုံးဟာ သကြားချည်းပဲ ပြီးတော့ သကြားတိုင်းဟာ ချိုကြတာချည်းပဲ။ မချိုတဲ့ သကြားရယ်လို့ မရှိဘူး။ ဒီလို သကြားအမျိုးမျိုးအစားစား ထုတ်ကြတာက သူတို့ကို သုံးစွဲပုံ သုံးစွဲနည်း အမျိုးမျိုး ရှိကြလို့ပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာလဲ ထို့အတူပါပဲ။ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဈင် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ အမိတာဘာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ယောဂါစာရ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ၀ဇီရယာန ဗုဒ္ဓဘာသာ စသည်ဖြင့် ကွဲပြားနေကြသော်လဲ အနှစ်သာရအားဖြင့် အတူတူပါပဲ။ အဲဒီ အနှစ်သာရက ဘာလဲဆိုတော့ ကိလေသာမှ လွတ်မြောက်ခြင်း၊ ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ အနှစ်သာရပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ သူဖြစ်ပေါ်ရာ ယဉ်ကျေးမှု အမျိုးမျိုးနဲ့ ဟပ်မိအောင် အသွင် အမျိုးမျိုးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ အသစ်ဖြစ်တဲ့ မျိုးဆက် အသီးသီးနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ရာစုနှစ်များ တလျောက်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပြန်ပြီး အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုကြပါတယ်။ ပြင်ပ ပုံပန်းသဏ္ဌာန် အနေနဲ့ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနေတယ်လို့ ထင်ရသော်လဲ အားလုံးရဲ့ ဗဟိုချက်မ အနှစ်သာရကတော့ သစ္စာလေးပါး မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အပါအ၀င် ဘာသာကြီးများ အားလုံးဟာ ဂိုဏ်း အမျိုးမျိုး ကွဲခဲ့ကြပါတယ်။ သို့သော်လဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဂိုဏ်းအမျိုးမျိုးဟာ အချင်းချင်း ဘယ်တော့မှ စစ်ပွဲတွေ မဆင်နွှဲခဲ့ကြပါဘူး။ သူတို့ဟာ အချင်းချင်း ဘယ်တော့မှ ရန်မပွါး ခဲ့ကြပါဘူး။ ခုခေတ်မှာဆိုရင် ဂိုဏ်းတစ်ဂိုဏ်းရဲ့ ကျောင်းကန်ဘုရားကို တစ်ခြား ဂိုဏ်းတစ်ခုက သွားရောက်ပြီး အတူတကွ ဘုရားဝတ်ပြုကြပါတယ်။ တခြားဘာသာရေး လောကမှာ တကယ်တော့ အလွန်ရှားပါတယ်။
ဖြေ - ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ တရားတော်များကို နားလည် သဘောပေါက်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မည်သူမဆို တခြား ဘာသာတရား မှားတယ်လို့ မထင်ကြပါဘူး။ တခြားဘာသာတရားများကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်စစ်ဆေးဖို့ရာ စစ်မှန်တဲ့ လုံ့လ၀ီရိယကို ပြုသူမှန်သမျှ ဘယ်သူမှ အဲဒီလို မထင်ကြပါဘူး။ ဘာသာတရား အမျိုးမျိုးကို လေ့လာတဲ့ အခါမှာ ပထမဆုံး သတိပြုမိတာကတော့ ဒီဘာသာတရား တွေဟာ အချင်းချင်း ဘယ်လောက်များများ တူညီကြတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ အားလုံးသော ဘာသာတရားများက လူသားရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေဟာ ကျေနပ်ဖွယ် မရှိဘူးလို့ ၀န်ခံကြတာပါပဲ။ လူသားရဲ့ အခြေအနေ တိုးတက်လိုရင် စိတ်နေစိတ်ထား အပြုအမူ ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ အားလုံးယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဘာသာတရား အားလုံးဟာ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ ပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်း၊ လူမှုရေး၊ တာဝန်ဝတ်တရားများ ဆောင်ရွက်ခြင်း စတဲ့ ကျင့်ဝတ်များကို သင်ကြားပေးကြပါတယ်။ ဒီဘာသာတရား အားလုံးက အဆုံးစွန် ပြည့်စုံတဲ့ သဘောတစ်ခုဟာ ပုံသဏ္ဌာန် အမျိုးမျိုးနဲ့ ရှိတယ်ဆိုတာ လက်ခံကြပါတယ်။ ဘာသာတရားများက ဒီ လုံးဝအုပ်စုံ ပြည့်စုံတဲ့ သဘာဝကို ဘာသာစကား အမျိုးမျိုး၊ နာမည်အမျိုးမျိုး၊ အမှတ်အသား အမျိုးမျိုးနဲ့ ရှင်းလင်း ဖေါ်ပြကြပါတယ်။ အရာရာကို တစ်ဘက်သက် ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့နည်းကို အမြင်ကျဉ်းစွာ တွယ်ကပ်ထားကြတဲ့ အခါမှာသာ သည်းမခံနိုင်မှု၊ မာနတရားနဲ့ ကိုယ်သာမှန် စိတ်ထားတွေ ဖြစ်ပွါးပေါ်ပေါက် လာတတ်ပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ တရုတ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ လူ ၄ ဦး ကော်ဖီပန်းကန် တစ်လုံးကို ကြည့်ကြတယ် ဆိုပါစို့။ အဲဒီပန်းကန်ကို အင်္ဂလိပ်က Cup လို့ခေါ်တယ်။ ပြင်သစ်က Tasse လို့ခေါ်တယ်။ တရုတ်က Pei ၊ အင်ဒိုနီးရှားက Cawan လို့ခေါ်တယ်။ အဲဒါ သူ့အခေါ်မှန်တယ်၊ တစ်ခြားလူ့အခေါ် မှားတယ်လို့ ကိုယ့်အဘိဓာန် ကိုယ် ကိုးကားပြီး အကြောက်အကန် ငြင်းခုံးနေကြပါရော။ အဲဒီအခိုက်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး ရောက်လာပြီး ဘာမှပြောမနေဘဲ ကော်ဖီပန်းကန်ကို ကောက်ယူပြီး မော့သောက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ သူက ဟိုလူလေးယောက်ကို ပြောလိုက်တယ်။ ဒီပန်းကန်ကို ဘယ်လိုပဲ မိတ်ဆွေတို့ခေါ်ခေါ် လိုရင်းက ဒါကို ကော်ဖီသောက်ဖို့ အသုံးပြုတာပါပဲ၊ ငြင်းခုံနေလို့ ဘာအကျိုးရှိမလဲ၊ သောက်ဖို့ပန်းကန်ကို သောက်လိုက်မှ အမောပြေပြီး လန်းဆန်းလာမှာပေါ့၊ အဲဒါ လိုရင်းပဲ။ ဒါဟာ ဘာသာတရားများအပါ် ဗုဒ္ဓဘာသာက မြင်တဲ့ အမြင်၊ ထားတဲ့ စိတ်ထားပါပဲ။
စတုတ္ထ အမှန်တရားကတော့ ဆင်းရဲငြိမ်းစေတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်တဲ့ မဂ္ဂသစ္စာပါ။ ဒီ ဆင်းရဲငြိမ်းရေး နည်းလမ်းကလဲ ဒဿနပညာ သဘောတရားတွေနဲ့ လုံးဝ မသက်ဆိုင် ပါဘူး။ သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ နည်းလမ်းအတိုင်း လက်တွေ့ ကျင့်မှပဲ ရပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကလဲ အစမ်းသပ်ခံ နည်းလမ်းပါ။ သိပ္ပံပညာမှာလိုပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ရှင်းပြဖို့လဲ အနန္တ တန်ခိုးရှင် အယူအဆကို လက်ခံဖို့ မလိုပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုယ်တိုင်က စကြာဝဠာ ကမ္ဘာလောကြီးရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို သဘာဝ နိယာမတွေနဲ့ ရှင်းပြထားပါတယ်။ ဒီအချက် အားလုံးက ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ သိပ္ပံနည်းကျ အနှစ်သာရကို သေချာစွာ ဖေါ်ဆောင် နေပါတယ်။ ဒီမှာလဲ ကျွန်ုပ်တို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ အမြဲတစေ ဆုံးမခဲ့တဲ့ အဆုံးအမက ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘယ်အရာကိုမဆို အကန်းယုံ အရမ်းယုံ မယုံမိကြဖို့၊ မေးမြန်း၊ စုံစမ်း၊ စစ်ဆေး၊ စမ်းသပ်ပြီးမှ ကိုယ်တိုင် တွေ့သိခံစားရတဲ့ အရာပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ယုံသင့်မှ ယုံဖို့ပါပဲ။ ဒီအဆုံးအမမှာ တိကျတဲ့ သိပ္ပံနည်းကျ အမြင် ပါဝင်နေပါတယ်။
နှစ်ဆယ်ရာစုနှစ်မှာ အကြီးမြတ်ဆုံး သိပ္ပံပညာရှင် ဖြစ်တဲ့ အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီလိုပြောပါတယ်။ နောင်တစ်ချိန်မှာ စကြ၀ဠာ တစ်ခုလုံး ကိုးကွယ်ကြတဲ့ ဘာသာတရားတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီဘာသာတရားဟာ ထာဝရဘုရား အယူအဆကို လွှမ်းမိုးသွားလိမ့်မယ်။ တယ် တရားသေ ၀ါဒကိုလဲရှောင်လွှဲနိုင် လိမ့်မယ်။ သဘာဝတရားနှင့် ဘာသာတရား နှစ်ခုလုံးကို လွှမ်းခြုံမိတဲ့ ဒီဘာသာတရားဟာ ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးလုံး ကိုယ်တွေ့ ခံစား သိမြင်မှုနဲ့ အဓိပ္ပါယ် ပြည့်ဝတဲ့ ပေါင်းစည်း ညီညွတ်မှုပေါ်မှာ အခြေခံလိမ့်မယ်။ ဒီအချက်တွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာက အဖြေပေးလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့သာ ခေတ်သစ် သိပ္ပံနည်းကျ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ ဘာသာတရားတစ်ခု ရှိတယ်ဆိုရင် အဲဒီ ဘာသာတရားဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဖြေ - လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတရားများမှာ အခြေခံပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကို နိဗ္ဗာန်မှ ဝေးစေတဲ့ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံများဟာ မကောင်းမှုတွေ ဖြစ်ပါတယ် (အမှားတွေပါ)။ ပေးကမ်း လှူဒါန်းခြင်း၊ မေတ္တာထားခြင်းနှင့် အသိပညာတို့ အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ နိဗ္ဗာန်သွားရာ လမ်းကြောင်းကို ရှင်းလင်းပေးတဲ့ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံများသာလျှင် ကောင်းမှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်(အမှန်တွေပါ)။
ဒါကြောင့် အမှားအမှန်ကို သိဖို့ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်ဟာ အရာသုံးခုကို ကြည့်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ (၁)ရည်ရွယ်ချက်၊
ဒါန၊ မေတ္တာ၊ ပညာတို့အပေါ်မှာ အခြေခံလို့ ရည်ရွယ်ချက်က ကောင်းရင်၊ ပြီးတော့ မိမိကိုယ်ကိုလဲ (ပိုပေးကမ်း လှူဒါန်းအောင်၊ ပိုမေတ္တာ ထားအောင်၊ ပိုအသိပညာပွါးအောင်) ကူညီရင်၊ ပြီးတော့ သူတစ်ပါးကိုလဲ (ပိုပေးကမ်း လှူဒါန်းအောင်၊ ပိုမေတ္တာ ထားအောင်၊ ပိုအသိပညာပွါးအောင်) ကူညီရင် အဲဒီ အလုပ်တွေဟာ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ၊ ကောင်းတဲ့ ကိုယ်ကျင့် တရားတွေပါပဲ။ တကယ်တော့ ဒီအချက်ဟာ အမျိုးမျိုး အစားစား ထွေပြားလှပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ်က အကောင်းဆုံး ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်လိုက်ပေးမဲ့လဲ ကိုယ့်အတွက်ဖြစ်စေ၊ သူတစ်ပါးအတွက် ဖြစ်စေ ကောင်းကျိုး ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ့် ရည်ရွယ်ချက်က မကောင်းပေမဲ့လဲ ကိုယ့်အလုပ်က သူတစ်ပါးကို ကောင်းကျိုး ရစေတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းကောင်းနဲ့ လုပ်တဲ့ အလုပ်က ကိုယ့်ကို အကျိုးရစေပေမဲ့ သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်ကောင်း ထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ ဒီလို ကိစ္စမျိုးတွေမှာ အကောင်းနှင့် အတော်အသင့်ကောင်းတာ ရောနေပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်က မကောင်းတဲ့အတွက် အလုပ်ကလဲ ကိုယ့်ကိုရော သူတစ်ပါးကိုပါ အကျိုးမရစေဘူး ဆိုရင် ဒီလို အလုပ်မျိုးဟာ မကောင်းပါဘူး။ ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းလို့ အလုပ်ကလဲ ကိုယ့်ကိုရော သူတစ်ပါးကိုပါ ကောင်းကျိုး ရစေတယ်ဆိုရင် ဒီလို အလုပ်မျိုးဟာ အပြည့်အ၀ ကောင်းတဲ့ အလုပ်ပါ။
ဖြေ - ရှိပါတယ်။ ငါးပါးသီလဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုယ်ကျင့်တရားရဲ့ အခြေခံ ကျင့်ဝတ်ပါပဲ။ ပထမ သိက္ခာပုဒ်က သတ္တ၀ါကို ထိခိုက် နာကျင်စေခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယက ခိုးမှုမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ တတိယက ကာမဂုဏ် ကိစ္စတွေမှာ ဖေါက်ပြန် မှားယွင်းစွာ ကျင့်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ စတုတ္ထက လိမ်ညာပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ ပဉ္စမက မူယစ်စေတတ်တဲ့ အရက်သေစာနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးမှန်သမျှမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းများပါပဲ။
ဖြေ - သင့်အတွက်တော့ ကောင်းမှာပေါ့။ အဲဟို အသတ်ခံရတဲ့ ပိုးမွှား၊ အသတ်ခံရတဲ့လူမှာ ဘယ်လိုနေမလဲ။ သင် အသက်ရှင်နေချင်သလို သူတို့လဲ အသက်ရှင် နေချင်တာပေါ့။ သင်ရောဂါဖြန့်ပိုးကို သတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့ အခါမှာ ကိုယ့်ကို စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု (ကောင်းတာ)နှင့် ပြောင်းပြန်သဘော (မကောင်းတာ) ရောနှောနေတယ်။ အဲဒီ သတ်ဖြတ်မှုက သင့်ကို ကောင်းကျိုး (ကောင်းမှု) ရစေပြီး၊ ဟိုပိုးမွှားကို ဆိုးကျိုး (မကောင်းမှု) ရစေတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ဒီတော့ ရံဖန်ရံခါမှာ သတ်ဖြတ်ဖို့ လိုကောင်းလိုမှာ ဖြစ်ပေတဲ့ ဘယ်တော့မှ ကောင်းမှုတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဖြေ - ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ခွဲခြားမှု မရှိဘဲ အားလုံးကို လွှမ်းခြုံမိတဲ့ သနားကြင်နာ ကရုဏာတရား တိုးပွါးဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကမ္ဘာလောကကြီးကို သတ္တ၀ါတိုင်း သူ့နေရာနှင့်သူ၊ သူ့လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်သူ အသီးသီး စုပေါင်း ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အပေါင်းအဖွဲ့ကြီး တစ်ခုအဖြစ် မြင်ကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ သဘာဝတရားရဲ့ သိမ်မွေ့တဲ့ ချိန်ညီမှုကို ဖျက်ဆီးမပြစ်မီ ကျွန်ုပ်တို့ သတိထားသင့်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ သဘာဝတရားကို အပြည့်အ၀ လက်ဝါးကြီးအုပ် သုံးစားခြင်း၊ လျော့သွားတာကို ပြန်ဖြည့်မပေးဘဲ သဘာဝတရားရဲ့ နောက်ဆုံး အစက် အပေါက်ကလေး တစ်ခုကိုတောင်မှ မရမက ဖြစ်ညှစ်ယူခြင်း၊ သဘာဝတရားကို အနိုင်ယူခြင်း၊ လွှမ်းမိုးခြင်းများ အပေါ်မှာ အလေးပေးထားတဲ့ အဲဒီ ယဉ်ကျေးမှုကိုပဲ ကြည့်ပါဦး။ အခု သဘာဝက တော်လှန် တိုက်ခိုက်နေပါပြီ။ လေဟာ အဆိပ် သင့်နေပါပြီ။ မြစ်ရေတွေ ညစ်ညမ်းပြီး ခန်းခြောက်ကုန်ကြပြီ။ လှပတဲ့ တိရစ္ဆာန် မျိုးစိတ်ပေါင်း မြောက်များစွာဟာ မျိုးသုဉ်းကုန်ကြပါပြီ။ တောင်တွေပေါ်မှာ သစ်ပင် ကင်းမဲ့ပြီး တောင်ကတုံးတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ ရေတိုက်စားကုန်ကြပြီ။ ရာသီဥတုတောင်မှ ပြောင်းလဲ နေပါပြီ။ လူတွေဟာ ကြိတ်ချေဖို့၊ ဖျက်ဆီးဖို့၊ သတ်ဖြတ်ဖို့၊ စိတ်စောနေမှုကလေး နည်းနည်း လျှော့ပေးလိုက်ရင်ပဲ အခုပြောခဲ့တဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်ပေါ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးဟာ သဘာဝရဲ့ အသက်ကို လေးစားမှု နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုတိုးလာအောင် ကြိုးစားသင့်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ သတ္တ၀ါရဲ့ အသက်ကို သတ်ဖြတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း ဆိုတဲ့ ပထမ သိက္ခာပုဒ်က ပြောပြနေတဲ့ အချက်ပါပဲ။
ဖြေ - လူ့အသိုင်းအ၀န်းထဲမှာ ဖြစ်စေ၊ စီးပွါးရေး လောကထဲမှာ ဖြစ်စေ မုသားမပါဘဲ နေထိုင်လုပ်ကိုင်ဖို့အမှန်တကယ် မဖြစ်ဘူးဆိုရင် ဒီလို ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ အကျင့်ပျက်မှုမျိုးကို ပြောင်းလဲ ပစ်သင့်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာ ပိုပြီး တော်တည့်မှန်ကန်ဖို့၊ ပိုပြီး ရိုးသားဖြောင့်မတ်ဖို့ ကြိုးစားရင်း ပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်လို့ လက်တွေ့ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ဖို့ သန္နဋ္ဌာန်ချထားတဲ့ လူမျိုးပါ။
ဖြေ - ငါးပါးသီလဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုယ်ကျင့်တရားရဲ့ အခြေခံ ကျင့်ဝတ်မျှပါပဲ။ ကျင့်ဝတ်အားလုံး မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မကောင်းတဲ့ အပြုအမူတွေကို မှတ်သားထားပြီးတော့ အဲဒါတွေကို မလုပ်မိအောင် ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ကျင့်တရားကို စ ရပါတယ်။ ဥပမာ - စကားပြောတယ် ဆိုကြပါစို့။ မုသားပြောမှုကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားဖြင့် စ သင့်ကြောင်း မြတ်စွာဘုရား မိန့်တော်မူပါတယ်။ အဲဒီလို ရှောင်ကြဉ်ပြီးတော့ မှန်တဲ့စကား နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့စကား၊ ယဉ်ကျေးဖွယ်ရာစကား၊ အချိန်ကာလနှင့် ကိုက်ညီတဲ့စကားကို ပြောရပါမယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက အောက်ပါအတိုင်း မိန့်တော်မူပါတယ်။ မမှန်သော စကားကို ရှောင်ကြဉ်သူသည် မှန်သောစကား၊ အားကိုးထိုက်သောစကား၊ ယုံကြည်ထိုက်သောစကား၊ မှီခိုအားထားထိုက်သော စကားကို ပြောသူဖြစ်သည်။ သူသည် လောကကို မလိမ်ညာ မလှည့်စားပေ။ ဂုံးချောစကား ရှောင်ကြဉ်သူသည် လူအများကြားတွင် စိတ်ဝမ်း ကွဲပြားစေဖို့ရာ ဤနေရာ၌ ကြားသောစကားကို ထိုနေရာ၌ မပြောကြားပေ။ ထိုနေရာ၌ ကြားသော စကားကို ဤနေရာ၌ မပြောကြားပေ။ သူသည် စိတ်ဝမ်းကွဲပြား နေသူများကို အစေ့အစပ်စကား ပြောကြား လေ့ရှိ၏။ ခင်မင်နေသူများကို ပိုမိုချစ်ခင်အောင် အားပေးစကား ပြောကြားတတ်၏။ ညီညွတ်မှုသည် သူ၏ ပျော်ရွှင်မှု၊ ညီညွတ်မှုသည် သူ၏ ၀မ်းမြောက်မှု၊ ညီညွတ်မှုသည် သူ၏ ချစ်ခင်မှုဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ သူစကားပြောရာတွင် ပါဝင်သော စိတ်ထား စေတနာဖြစ်သည်။ ကြမ်းတမ်း ရိုင်းစိုင်းသော စကားကို ရှောင်ကြဉ်သူသည် အပြစ်ကင်းသော စကား၊ နား ၀င်သာသော စကား၊ နှစ်သက်ဖွယ်သော စကား၊ စိတ်နှလုံးသို့ သက်ဝင်သော စကား၊ ယဉ်ကျေးသော စကား၊ အများနှစ်သက် သဘောကျသော စကားကို ပြောဆိုတတ်၏ ။ အကျိုးမရ အနှစ်သာရ မရှိသော စကားကို ရှောင်ကြဉ်သူသည် အချိန်ကာလနှင့် ကိုက်ညီသော စကား၊ မှန်သောစကား၊ အကျိုးရှိသော စကား၊ တရားနှင့် စပ်သော စကား၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် စပ်သော စကားကို ပြောဆိုတတ်၏။ သူသည် စိတ်နှလုံး၌ သိုမှီထားထိုက်သော စကား၊ အချိန်ကာလနှင့် လျော်သောစကား၊ သင့်လျော် လျောက်ပတ်သော စကား၊ အဓိပ္ပါယ် ပြည့်ဝသောစကား၊ အကျိုးစီးပွါးနှင့် စပ်သော စကားကို ပြောဆိုတတ်၏။
ဖြေ - ဒါကတော့ လုံးဝ မှားပါတယ်။ မြင့်မြတ်တဲ့ အပြစ်ကင်းတဲ့ အပြုအမူတွေကို ပြုမူနေကြတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ၊ ဘယ်ဘာသာမှ မကိုးကွယ်သူတွေ သန်းချီရှိကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ တစ်ခါတလေမှသာ မဟုတ်ဘဲ အမြဲတစေ မြင့်မြတ်တဲ့ အပြစ်ကင်းတဲ့ အပြုအမူတွေကို ပြုမူနေကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မြတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး တစ်ယောက်ကို ယုံကြည်နေကြတဲ့ လူများအကြားမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလိုပါပဲ။ သင်ဟာ ရိုးသားစွာ ကြိုးစားရင် သင့်ရဲ့ အပြုအမူတွေကို စင်ကြယ်အောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လုံးဝ အပြည့်အစုံ မစင်ကြယ်နိုင်တောင်မှ ပိုပြီး စင်ကြယ်အောင် ကြိုးစား လုပ်ဆောင်နိုင်တာကတော့ သေချာပါတယ်။
မေး - ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ သက်သတ်လွတ် သမားတွေ ဖြစ်သင့်တယ် မဟုတ်လား။
ဖြေ - အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာ သက်သတ်လွတ်သမားမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ တပည့်များကိုလဲ သက်သတ်လွတ်စားဖို့ မမိန့်ကြားပါဘူး။ ဒီခေတ်မှာတောင်မှ သက်သတ်လွတ်သမား မဟုတ်ဘဲ စိတ်ကောင်း နှလုံးကောင်းရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အများကြီးပါပဲ။
မေး - ဒါပေမဲ့ သင် အသားစားရင် သတ္တ၀ါတစ်စုံတစ်ဦး သေတဲ့အတွက် သင့်မှာ သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့် တာဝန်ရှိပါတယ်။ အဲဒါဟာ ငါးပါးသီလထဲက ပထမ သိက္ခာပုဒ်ကို ချိုးတာ မဟုတ်ပါဘူးလား။
ဖြေ - အဲဒါ မမှန်ပါဘူး။ တရုတ် မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာက သက်သတ်လွတ်စားဖို့ အလွန် အလေးထားပေမဲ့ တိဘက်နှင့် ဂျပန်မှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ကတော့ အမျိုးသား အမျိုးသမီးရော ဘုန်းကြီးတွေပါ အသားစားတဲ့ အလေ့ ရှိပါတယ်။
မေး - သို့သော်လဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်ဟာ သက်သတ်လွတ်သမားပဲ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ကျွန်ုပ်ထင်နေတုန်းပဲ။
ဖြေ - လူတစ်ယောက်ဟာ သက်သတ်လွတ် ၀ါဒကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကျင့်သုံးပြီး တကိုယ်ကောင်းဆန်မယ်၊ မရိုးဖြောင့်ဘူး၊ ယုတ်ညံ့ နိမ့်ကျမယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ယောက်က သက်သတ်လွတ်သမားတော့ မဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ်ချင်စာတရားရှိတယ်၊ ရက်ရောတယ်၊ သနားကြင်နာတတ်တယ်ဆိုရင် ဒီလူ နှစ်ယောက်ထဲက ဘယ်သူဟာ ပိုတော်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်မလဲ။
မေးသူ - ရိုးဖြောင့်ပြီး သနား ကြင်နာတတ်တဲ့လူက ပိုတော်ပါတယ်။
ဖြေသူ - ဘာကြောင့်ပါလဲ။
မေးသူ - ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်က စိတ်ကောင်း နှလုံးကောင်း ရှိကြောင်း ထင်ရှားလို့ပါ။
ဖြေသူ - အတိအကျ မှန်ပါတယ်။ အသား မစားတဲ့ လူက စိတ်ထား မဖြူစင်ဘဲ ရှိတတ်သလို အသားစားတဲ့လူက စိတ်နှလုံး ဖြူစင်နေတာလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓတရားတော်မှာ အရေးကြီးတာက စိတ်နှလုံးရဲ့ အရည်အချင်းပါ။ အစားအစာမှာပါတဲ့ အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ များစွာသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ အသားမစားဖို့ကျတော့ သိပ်ဂရုစိုက်ကြတယ်။ တစ်ကိုယ်ကောင်း ဆန်တာ၊ မရိုးဖြောင့်တာ၊ ရက်စက်တာ၊ မနာလို ၀န်တိုတာတွေ ကိုတော့ ကြောင့်ကြခံပြီး မစဉ်းစားကြဘူး။ လုပ်ဖို့ လွယ်ကူတဲ့ အစားအစာ ပြောင်းလဲတာကိုတော့ လုပ်ကြတယ်။ လုပ်ဖို့ ခက်တဲ့ စိတ်ထား ပြောင်းဖို့ကျတော့ မလုပ်ကြဘူး။ ဒါကြောင့် သက်သတ်လွတ်စားသူ ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အရေး အကြီးဆုံးက စိတ်ထား ဖြူစင်ဖို့ပဲဆိုတာ မှတ်ထားပါ။
Posted by Ko Gyii at 8:01 PM No comments :
Links to this post Labels: ပါဏာတိပါတ , ဘာသာရေး , အထွေထွေ ဗဟုသုတ
ဟာသ (အချိုးတွေ ပြောင်းပစ်လိုက်)
ဟာသလို့ ကြိုခေါင်းစဉ်တပ်ထားမှ တော်ကာကျမယ်ထင်တယ် :)
အချိုးတွေ ပြောင်းသွားတာကို ကာတွန်းဆရာက သတိထားမိလို့ သရော်ထားတဲ့ ဟာသလေးပါ။
Vol.6 / No.41 Monday, September 13 - 19 , 2010 ထုတ် THE VOICE ဂျာနယ်ထဲက ကာတွန်းလေး.. အမှန်အကန် ဟာသလေးပါ။
Posted by Ko Gyii at 7:32 PM No comments :
Links to this post Labels: အထွေထွေ ဗဟုသုတ
ပေါင်မုန့်လုပ်တဲ့စက်ကလေး (စီတီးမတ်ကဝယ်လာတာ Akira တံဆိပ်နဲ့လေ) အဲတာလေး ဝယ်လာပြီး ကိုယ့်ဘာသာ ပေါင်မုန့်ဖုတ်စားနေတာ တယ်မိုက်သဗျာ... ၉၀၀ ဂရမ် တစ်လုံးကို ခန့်မှန်းခြေ ကုန်ကျစရိတ်၆၅၀ကျပ်လောက် ရှိသဗျ။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ ဥပဒ်ဖြစ်တာတွေ မပါတော့ ဘူးပေါ့။ အဲ့ဒီ စက်မှာ လုပ်နည်းလေးတွေ ပါတယ်။ အဲဒါလေး ကြည့်ပြီး ဖုတ်နေတာ...
ရေ ၃၀၀ မီလီလီတာ
ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁.၇၅ ဇွန်း
သကြား ဇွန်းကြီး ၂ဇွန်းတိတိ
ထောပတ်၊မဂျရင်း ထည့်ချင် နဲနဲထည့် (optional)
ကြက်ဥ ထဲ့ချင်ထည့် တစ်လုံး (optional)
ဂျုံမှုန့် ၅၀၀ ဂရမ်
အင်စတန့်ရိစ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁.၅၀ ဇွန်း
ဆီ ဇွန်းကြီး ၂ဇွန်းခွဲ
အစဉ်လိုက်ထည့်ပြီး။ မီးပလပ်တပ်ပြီး ၃နာရီလောက် လွတ်ထားရင် ရပါပြီဗျာ... ပေါင်မုန့် အလုံးကြီးတစ်လုံး ဖိုကိုဖွင့်လိုက်ရင် မွှေးနေတာပဲ။ (ကျက်သွားရင် ဘေးအိမ်ကတောင် မနာလိုဖြစ်ရအောင်ကို မွှေးတာနော် :) )
မနက်စာ (ဘရိတ်ဖတ်စ်) အတွက် မှန်းပြီး ညဘက်ထ လုပ်ထားမိလိုက်ရင် ၃နာရီနဲ့ ရတော့ မနေနိုင်ပါဘူးဗျာ..တမိသားစုလုံးထပြီး ဝါးတီးဖွင့်ပစ်လိုက်တာ...မနက်ကျတော့ ပေါင်မုန့်က ဖင်ကပ်ပဲ ကျန်တယ်။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လုပ်တယ် ဆိုတော့ ကြိုက်သလောက်စားပဲ..ကုန်ရင် နောက်တစ်လုံးလုပ်မှာ ဆိုတော့လေ..
ဂျုံမှုန့် တပိဿာတစ်ထုပ်မှာ ၁၆၀၀ ဂရမ်ပါတော့ ပေါင်မုန့် ၃လုံး ရတယ် အိုက်ထို့ရေ...။
တခြား ဖို၊ အိုဗင်နဲ့ လုပ်နည်းတော့ မသိသေးဘူး။ လောလောဆယ် ဒါလေးနဲ့ အဆင်ပြေနေတယ်။ :)
Posted by Ko Gyii at 9:54 PM No comments :
Dropbox မှာ သတိပြုမိတာလေးတွေ
Dropbox ဘာလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ကိုစေတန်ဂေါ့ရေးထားတဲ့ Dropbox မိတ်ဆက် (link: http://www.saturngod.net/knowledgebase/dropbox ) ကို ဖတ်ပါလို့ ညွှန်းပါရစေ။ သူရေးထားတာ တော်တော်ပြည့်စုံပါတယ်။
Dropbox ကို စသုံး၊ စမ်းသုံးကြည့်မယ် ဆိုရင် ဒီလင့်လေးက http://db.tt/kk53Qu9 သွားပေးရင် သိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း ပွိုင့်တိုးတာပေါ့နော်း... :)
ဒီမှာတော့ Dropbox သုံးရင် ကျနော် တွေ့တာလေးတွေ ဆွေးနွေးကြည့်ပါမယ်။
အကောင့် စဝင်ခါစမှာ ဖိုလ်ဒါ နှစ်ခု တွေ့ပါတယ်။ Public ရယ် Photo ရယ်ပါ။
Public ဖိုလ်ဒါဟာ သူ့အထဲ ထဲ့သမျှဖိုင်မှာ အော်တို Public Link ရပါတယ်။ (အဲ့ ဖိုလ်ဒါထဲက ဖိုင်တစ်ခုခုကို right click ခေါက်ကြည့်ရင် မြင်ရပါတယ်။) အဲ့တော့ ဒီ public link ကို သိသူတိုင်း ဖိုင်ကို ဝင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ပဲ လင့်ပေးတော့ ဆွဲယူလို့ပဲ ရပါတယ်။ ဝင်ဖျက်လို့ မရပါ။
Photo ဖိုလ်ဒါဟာလည်း သူ့အထဲ ထဲ့သမျှ ပုံဖိုင်၊ ဖိုလ်ဒါတွေမှာ အော်တို Public Gallery Link ရပါတယ်။ (အဲ့ ဖိုလ်ဒါထဲက ဖိုင်တစ်ခုခုကို right click ခေါက်ကြည့်ရင် မြင်ရပါတယ်။) အဲ့တော့ ဒီ public Gallery link ကို သိသူတိုင်း ဂါလာရီကို ဝင်ကြည့် ဆန္ဒရှိက ပုံကိုယူနိုင်ပါတယ်။ ဝင်ဖျက်လို့ မရပါ။
ထို ဖိုလ်ဒါနှစ်ခု၏ အပြင်မှာ မိမိဘာသာ ဆောက်သော ဖိုလ်ဒါများတွင် အော်တို public link မထွက်ပါ။ Security အပိုင်းကတော့ ထုံးစံအတိုင်း မိမိ၏ အီးမေးနှင့် password သိသူသာ ဝင်ယူလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ထို ဖိုလ်ဒါများကို public link ထွက်လိုသော် Rosemary လုပ်ကြည့်သလို Share လုပ်မှ ရပါမယ်။ ထိုသို့ ရှယ်ယာပေးထားသော ဖိုလ်ဒါ၏ public link ကို သိသူတိုင်း ထို ဖိုလ်ဒါထဲရှိ ဖိုင်ကို ဝင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဝင်ပြင်၊ ဝင်ဖျက်လို့ ရပါတယ်။
အလားတူ သူများမှ မိမိအား ရှယ်ယာပေးလာသော ဖိုလ်ဒါထဲရှိ ဖိုင်ကို ဝင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဝင်ပြင်၊ ဝင်ဖျက်၊ ဝင်ဆောက်လို့ ရပါတယ်။
Public ဖိုလ်ဒါ၏ အပြင်ဘက်တွင်ရှိသော ဖိုင်များ အော်တို public link မထွက်ပါ။ ရှယ်လိုပါက Public ဖိုလ်ဒါ ထဲ ထည့် (ပုံဆိုရင် Photo ဖိုလ်ဒါထဲ ထည့်) ဒါမှမဟုတ် ဖိုလ်ဒါ အလွတ်ထဲ ထည့်၍ ၎င်း ဖိုလ်ဒါကို ရှယ်မှ ရပါမယ်။ ဒီတော့ အပြင်မခံလိုပဲ read only သာ ပေးလိုပါက public ထဲ ထည့်ပေးတာ ပိုကောင်းပါမယ်။ (ဥပမာ Rosemary မှ ရှယ်ပေးသော private Folder အတွင်း ကျနော် စာတစ်စောင် ဝင်ရေးလိုက်လို့ ရသွားတာ သတိပြုကြည့်ပါ။)
နောက်တစ်ခုက... Public ဖိုလ်ဒါထဲမှ မိမိရှယ်ထားသော ဖိုင်များ နေရာရွှေ့ ၊ ဖိုင်အမည် ပြောင်းပါက အော်တို Public Link လည်း ပြောင်းသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရင် လင့် အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ လင့်အသစ် ပြန်မျှမှ ရပါမယ်။ ကျနော် မျှထားတဲ့ ဖိုင် နာမည် ပြောင်းမိလို့ လင့်ပါ ပြောင်းသွားပါတယ်။ လင့် အသစ်က http://dl.dropbox.com/u/11126335/Public_EBooks/PyiThuNiTi%2037083049-www-maukkha-org.pdf ဖြစ်ပါတယ်။
မျှတဲ့ လင့်ရှည်နေရင် တိုလိုက်လို့လည်း ရပါတယ်။ လင့်အတိုကို ဝက်ပေ့က ဝင်ယူရပါတယ်။ ခုနကဖိုင်၏ လင့်အတိုမှာ http://db.tt/kKrgLbC ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ကိုယ်က ဖိုင်ကို မျှရင် ယူသူက ဖိုင်ကို တန်းဆွဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖိုင်ဆိုဒ် ကြီးရင် ယူသူဘက်မှာ (ဖိုင်ကို ဆွဲချနေတာကြောင့်) စက်ကြောင်သွားသလို ခံစားရစေပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးရင် ဖိုင်ကို မျှတာထက် သူ့ parent folder ကို မျှတာက ပိုကောင်းမယ် ခံစားရပါတယ်။ သတိထားမိလို့ပါ။ (*You can't create shared folders inside your Public folder.)
ကျနော်တို့ ကိုယ့်အကောင့်နဲ့ ဒလော့ဘောက် ဝင်သုံးတဲ့ ကွန်ပျူတာတိုင်းမှာ ကိုယ် access လုပ်ခဲ့တဲ့ ဖိုင်တွေ ကျန်ရစ်နေပါတယ်။ ဒါဟာ အွန်လိုင်းဘက်က လုံခြုံနေပေမယ့် အော့ဖ်လိုင်းဘက်မှာတော့ အဲ့ဖိုင်တွေ secure ဖြစ်ဖို့ရာ ကိုယ့်တာဝန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် (မိမိတစ်ဦးတည်း သုံးသည့် စက်မဟုတ်ပါက) ဒလော့ဘောက်က အောက်/ ထွက်ပြီဆိုရင် ထို ဖိုင်များကိုပါ Windows Explorer ဖွင့်၍ ရှင်းသင့်က ရှင်းပစ်ဘို့ သတိထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်...။
ကျနော် တွေ့တာ ဒါ အကုန်ပါပဲ။ နောက်ထပ် သတိပြုမိတာ တွေ့ရင် ဆွေးနွေးပေးကြပါဦးဗျို့...
Posted by Ko Gyii at 8:20 PM No comments :
Links to this post Labels: Dropbox , အထွေထွေ ဗဟုသုတ
ပါဏာတိပါတ။ သတ္တ၀ါရဲ့ အသက်ကို သတ်ခြင်းအတွက် တိုက်ရို...